Mazita evakadzi veDisney: ziva nhoroondo yavo | Ndipei zororo
Kune nyika yemashiripiti iyo yatakaratidzwa kwazviri kubvira patakazvarwa: ndinoreva nyika yeDisney uye zviuru nezviuru zvevatambi zvakagadzirwa zvakapoteredza. Izvo hazvidzivirike kuyananisa studio neinchanted castles, fantasy, adventures uyezve: ayo echinyakare machinda. Svika pakuziva ese eDisney Mambokadzi uye nhoroondo yavo mune ino chinyorwa. Disney Mambokadzi anomiririra yakakosha kwazvo franchise yeiyo Walt Disney Kambani.
Tine edu mazhinji mafirimu ehupenyu ane protagonists vakadzi vakanaka vechidiki vane nyaya dzakasiyana dzinotidzidzisa tsika dzakadai soushamwari, ushingi, mutsa, kuzvimirira, kuremekedza vamwe vedu varume uye kurwira rudo rwechokwadi, kungodoma vashoma. mienzaniso. Kunyangwe paine gakava rakakomberedza dudziro yenyaya yega yega, hatigone kuramba kuti nyaya dzavo dzinozivikanwa pasi rese uye kuti vakaratidza makore ekutanga ehupenyu hwevasikana vazhinji kubvira kutanga kwezana ramakore rapfuura. Ndokusaka nguva ino iyo yekumisikidzwa kwekuburitswa kwayo inounzwa pachiratidziro chikuru, pamwe nekudzokorora kupfupi yenyaya iyo studio firimu yakasarudza kutaura.
Nezvikonzero zvekutengesa, iyo firimu studio inokamuranisa vese vayo mavara kuva franchise. Disney Princesses yakatanga muna 1937 uye inoumbwa nevane gumi nemumwe kusvika ikozvino: Snow White (1937), Cinderella (1950), Aurora (1959), Ariel (1989), Bella (1991), Jasmine (1992), Pocahontas (1995), Mulán (1998), Tiana (2009), Rapunzel (2010) ) uye Mérida (2012).
12 Varipi vakasara veDisney World Princesses?
Waive yekutanga yemadzimambo eDisney akaunzwa kuchidzidzo hombe skrini muna 1937 uye izvo zvaimiririra kuvhurwa kwekodzero.
Gadzirwa na Grimm hama, Snow White imwanasikana wechidiki ane moyo muhombe: Anoda kugara nemasikirwo nemhuka uye aigara mumuzinda naamai vake vakaipa vokurera vaigara vachinzwa kutyisidzirwa. Nhau yacho inoitika apo amai vokurera vakaipa vanoongorora girazi rake remashiripiti uye iye aburitsa pachena kuti runako rwake rwakapfuurwa nerwemwanasikana wake. Mambokadzi akaipa anopenga negodo uye anosarudza kubvisa Snow White kuti awanezve zita remukadzi akanaka kwazvo muumambo; vassal anotarisira haakwanise kupedzisa basa rakapihwa uye anopa zano mambokadzi kuti atize asazombodzoka.
Snow White inotanga rwendo kwaanosangana nevanomwe vanomwe vane hunhu hwakanyanya, ivo vanobva vaita shamwari dzepamwoyo uye vakasarudza kumukoka kuti agare navo. Zvese zvinhu zvaifamba zvinoshamisa, kusvikira rimwe zuva rakaipa, mambokadzi anowana pekugara remwanasikana wake uye anoonekwa pamusuwo wake akazvishandura kunge mukadzi akura ari kushaiwa anonzwirwa tsitsi nemutambi wedu. Mukutenda, sechikamu chehurongwa hwakaipa, chembere iyi inomupa mubayiro uye inomupa apuro, iro rakaiswa chepfu. Sezvinotarisirwa, mukurumwa kwekutanga mukadzi wechidiki anodonha ndokudonha muhope hope kubva kwaasingazombomuka.
Shamwari dzake padzinodzoka kubva kubasa kumugodhi, vanoona mutumbi waChris White votevera chembere, iyo inofa mushure mekudonha padombo. Vasingashinga kumuviga, ivo vanomwe madiki vanosarudza kukudza shamwari yavo uye runako rwake mugirazi yegirazi iyo yavakaunza maruva mazuva ese. Nguva pfupi gare gare, Prince Florian akaonekwa uyo aigara achidanana naye. Paanofambiswa kuti aone musikana wake akagwadama, anosarudza kumupa kutsvoda kunomumutsa kubva kuhope huru.
Iyo yekutanga firimu yakaitika muna 1950 uye hunhu hwakagadzirwa na Charles kutadza zvisinei vhezheni inozivikanwa kwazvo yengano yakaburitswa ne Grimm hama.
Nyaya iri pamusoro pemukadzi wechidiki aive nherera yaamai kubva pakuzvarwa uye aive pasi pekuchengetwa nababa vake vaaida, vakafa makore akatevera. Cinderella akasara akachengetwa naamai vake vokurera uye akamanikidzwa kutora basa repamba uye kugutsa zvaidikanwa nehama dzake dzekurera. Achishuvira nyika iri nani, aigara achishushikana kuti aone divi rakajeka rehupenyu; Kunyangwe nemabasa akaoma ezuva nezuva epamba, aigara achichengeta mweya wake uchifara uye uzere nemutsa.
Zvichakadaro, mambo akafunga kuti yaive nguva yekuti mwanakomana wake mumwe chete aroore. Saka akaronga bhora rakakura mumuzinda kuti asarudze mukadzi wake weramangwana, vasikana vese vehumambo vakashevedzwa kuchiitiko ichi. Cinderella akaronga dhirezi rake rakanakisa kuti aende, zvisinei ivo vanin'ina naamai vokurera vakaparadza chipfeko chake kubvisa mikana yekupinda muchiitiko ichi kubva runako rwake rwakatora mikana. Nechemumoyo, anotanga kuchema neshungu.
Maminetsi gare gare, amai vake vengano vanowoneka, avo vanomunyaradza vachishandisa huroyi netsvimbo yake yemashiripiti uye vanoshandura mamvemve aakange akapfeka kuita rokwe rakanaka kwazvo raakange asina kumbofungidzira. Iyo imwe chete yakauya ichiperekedzwa nemiti inopenya yegirazi uye chingoro chinopenya; zvisinei huroyi hwaive hwechinguvana uye hwaizopera pakati pehusiku. Zviripachena, nekukurumidza apo muchinda paanoona Cinderella achipinda mumba, anoshamiswa nerunako rwake uye anomukoka kuti atambe. Mushure mekufamba famba mumuzinda uye uchinakidzwa nemanheru nemuchinda anoyevedza, Cinderella anonzwa gumi nembiri o'clock chimes uye pasina imwe tsananguro, anotanga kumhanya akananga kungoro yake. Muchinda anomutevera uye anoedza kumumisa pasina kubudirira, chasara chete kwaari kwakatsvedza chakadonha netsaona panguva yekutiza.
Kudonha murudo nemukadzi asinganzwisisike, muchinda anomuraira kuti atsvage uye anoda kuti vashandi vake vamutsvage muhumambo hwese. Akakumbira kuti kutsvedza kutongwe pamusikana wese muumambo. Mushure mekuteedzana kwezvakaipa izvo Cinderella anofanirwa kupfuura, muchinda anozomuwana ndokumufungira. Aya ndiwo maitiro edu protagonist anova mambokadzi panguva iyoyo.
Zvirinani kuzivikanwa seKurara Runako, yaive nyaya yakatanga muna 1959 uye yakagadzirwa naCharles Perrault uye yakazogadziriswa neHama Grimm.
Zano racho rakanangana nekutukwa kwakatemerwa mudiki Aurora, uyo ari mucheche, akaroyiwa naMaleficent akaipa uyo akagadza muchindakadzi kuti arare hope dzisingaperi paakatendeuka makore gumi nematanhatu uye akabayiwa neshinda yegumbo rinotenderera. Kutukwa kwacho kunogona kungoitwa nekutsvoda kwerudo rwechokwadi.
Mambo, achiedza kusunungura mwanasikana wake kubva kune yakashata njodzi, akatumira musikana mudiki kuti agare nevakadzi vatatu: Flora, Primavera neFauna. Ndiani akarera Aurora semuzukuru uye akamuvanza madzitateguru echokwadi ehumambo. Mangwanani ezuva regumi nematanhatu rekuzvarwa, fairies dzakatumira Aurora kunotora mahabhurosi kuti vagadzirire keke uye ndipo paakasangana naPrince Philip uyo aivhima musango, rwaive rudo pakutanga kuona uye vakabvumirana kuti vaonane zvakare.
Aurora akaendeswa kumuzinda kunopemberera zuva rake rekuzvarwa uye kumuudza chokwadi nezve zvakapfuura, zvisinei Maleficent akamunyengerera ndokumutumira kunzvimbo iri kure mumuzinda maive nevhiri rekupedzisira rekutenderera rehumambo. Aya ndiwo mazadzisiro akaita chiporofita uye Princess Aurora akawira muhope dzisingaperi. Vakasarudza kumuchengetedza munhare yekuchengetedza nekuchengeta rosi pamakumbo ake.
Iwo mafairies akawana Prince Philip, pavakanzwa runyerekupe rwekusangana pfupi kwaakaita naAurora. Asi zvakadaro akasungwa naMaleficent kuitira kuti asazombobvisa kutuka kwake. Neraki, ivo fairies vakabatsira Felipe kutiza zvisungo zvaMaleficent akashanduka kuita shato ine ngozi. Mushure mekupokana kunonetsa, muchinda akakunda uye akazokwanisa kusangana naAurora zvakare kuti amutsvode uye adzorere kutukwa.
Mwanasikana mudiki waMambo Triton, Ariel mudiki mermaid uyo hupenyu hwake pasi pegungwa hwaive huzere nekushanya. Yake firimu yakaburitswa muna 1989 uye hunhu hwakagadzirwa naHans Christian Andersen.
Kubata kwake nenyika kunze kwegungwa, akatora The Little Mermaid kuti aongorore pamusoro pane dzakawanda nguva mukambani yeshamwari dzake dzepamwoyo Sebastián naFounder. Mune chimwe chezviitiko zvake, Ariel akaona dutu rine simba apo vashandi vaive munjodzi. Ikoko kwaive uko kwaakasangana naEric, muchinda akanaka uyo waakachengetedza ndokuunza kumahombekombe egungwa. Akawira murudo pakutanga kuona uye akatanga kumuimbira. Pakasvika muchinda, aive nemukana wekumunzwa uye kuona chiso chake; zvisinei Ariel aifanira kutiza masekondi gare gare vamwe vanhu pavakazonunura Eric.
Mambo anorambidza Ariel kuti adzokere kumusoro; zvisinei aive akatsunga kutsvaga Eric. Ndosaka achiita chibvumirano nemuroyi ane simba mumakungwa: Arsula. Ndiani akavimbisa kumushandura kuva munhu mukutsinhana nezwi rake rakanaka pasi pechinhu chimwe chete: Kana pazuva rechitatu panyika iye asina kuwana kutsvoda kwemuchinda wake, Ariel aidzokera kugungwa ova muranda wake. Mermaid mudiki akagamuchira asingazeze uye akabuda kune nyika yekunze kwaakakurumidza kuwana Eric, anobva angoziva chiso chake ndokubvunza zita rake kuna Ariel. Haakwanise kupindura sezvo anga asina izwi. Akaodzwa mwoyo, anofungidzira kuti haasi mudzimai wake asinganzwisisike, asi nenzira imwecheteyo, Eric anopa pekugara uye ndipo panguva yekuvapo kumutsiridza kukwezva kwakabuda mumusangano wavo wekutanga.
Pazuva rechitatu mukadzi anoonekwa achiimba pamhenderekedzo yegungwa, iyo nguva iyo muchinda paakamunzwa, akanyengedzwa uye akafunga kumuroora sezvo aive nechokwadi chekuti ndiye mukadzi akaponesa hupenyu hwake. Pakunzwa nhau, Ariel anoshungurudzika. Shamwari yake Scuttle, uyo ari seagull, anoona kuti iye ramangwana musikana aive Ursula chaiye. Saka anofunga zano rekuyambira Mambo Triton uye kukanganisa muchato.
Pakati pechisimba chine mhuka dzemumvura, rovira rinosvika pasina muchato wapera uye Ariel naArsula vanodzokera fomu yavo yekutanga. Panguva iyoyo muchinda anoziva chikanganiso chake uye achiedza kununura Ariel, zvisinei zvaive zvanonoka uye Ariel aive nechibvumirano chekuremekedza. Triton inoda rusununguko rwaAriel uye inopa kuchinja nzvimbo naye. Nechemufaro, muroyi anotambira uye anotora humambo. Nguva diki gare gare Eric anoonekwa uye anokuvadza muroyi neharuki, zvichikonzera tsaona inopedza hupenyu hwemuranda wake eels. Mukushatirwa, Úrsula anokura muhukuru uye anova hofori uye achikonzera dutu rine chamupupuri mugungwa.
Eric naArieri vari munjodzi, asi mune imwe nguva yerombo rakanaka, Eric anowana ngarava yakanyura iyo inokwanisa kufambisa bowsprit kuburikidza nemuviri waArsula, pakupedzisira ichiwana kufa kwake. Naizvozvi, kutukwa kwese kwakatangwa nemuroyi kwakagadziriswa uye King Triton akasunungurwa zvakare. Achiziva rudo rwechokwadi rwaive nemwanasikana wake nemuchinda, Triton anopa Eric mvumo yekuroora mwanasikana wake, saka akadzorera Ariel kudzokera mumunhu kuitira kuti vagare vachifara nekusingaperi.
Runako uye Chikara yakaburitswa mumitambo muna 1991 uye yakavakirwa pane nyaya yakagadzirwa naJeanne Marie Leprince de Beaumont.
Bella musikana akangwara kwazvo uye ane chinzvimbo asingagutsikane nezvakapihwa nenyika iyo akamukomberedza; Anogara nababa vake Maurice uye akapindwa muropa nekuverenga. Gastón izita remuridzi wake, iye muvhimi ane mukurumbira uyo Bella anogara achiramba. Iyi firimu inotanga kana kare, muchinda ane udyire anorangwa nemuroyi wekare paanoona kuti pakanga pasina runako mumoyo make: Anomushandura kuita Chikara ndokukanda huroyi kuimba yake yese, kusanganisira munhu wese ari maari. Iyo chete nzira yekutyora huroyi ndeyokuita kuti mumwe munhu awire murudo naye iye isati yachekwa rosi yapedza kuoma.
Kune rimwe divi, baba vaBella vanobatwa mumuzinda une hunyanzvi. Anoenda kunonunura uye anotaurirana nechikara nekuchinjana rusununguko rwake rwababa vake. Chibvumirano chakavharwa uye protagonist anotanga kusangana nezvose zvinotaurisa uye zvekugamuchira vaeni zvinoita shamwari naye. Mushure mekusanzwisisana nechikara, Bella anopukunyuka kubva kunhare. Pakati pesango anosangana nemamwe mapere ane nzara akange ave kuda kumurwisa, panguva iyoyo Chikara chinoratidza kumununura. Chiitiko ichocho chakaratidza kutanga kwehukama hukuru Bella paakadzokera kumuzinda uye akatanga kunakidzwa nekugara kwake imomo.
Zvichakadaro mumusha, Maurice aiedza kuwana rubatsiro rwakakosha kununura mwanasikana wake. Zvisinei, aisagona kugombedzera chero munhu kuti amubatsire kusvikira Gastón ave nepfungwa yekumupomera mhosva yekutadza kuora mwoyo uye kumutengesa Bella kuti amuroore achichinjanisa nekuvharirwa baba vake muchipatara chepfungwa.
Kudzoka mumuzinda, Chikara chinosarudza kuronga kudya kukuru kwaBella, akange amuda uye achidikanwa kana rudo rwake rwaidzoserwa. Pakupera kwemanheru, Chikara chinopa Bella kuti aone baba vake kuburikidza negirazi remashiripiti uye anowana mufananidzo usingafadzi wababa vake mune yakaoma mamiriro; chikonzero nei Chikara chichichisunungura kuti chigone kuenda kuchinunura. Anomupa girazi uye anosiya nhare, achisiya Chikara nevashandi vese varwadziwa pamoyo. Tariro yekutyora huroyi yakanga yaenda uye nguva yakanga yave kumhanya.
Bella paanowana baba vake, anomutora kuenda naye kumba kunomuchengeta. Nguva pfupi gare gare Gastón anoonekwa nachiremba kubva kuchipatara chepfungwa achipomera Maurice kupenga, vagari vazhinji vemumusha vakavaperekedza. Gastón anopa chipo chake: Ruoko rwaBella mukutsinhana nerusununguko rwababa vake. Bella anoramba uye anovaratidza Chikara kuburikidza negirazi remashiripiti kuti aone kuti baba vake vaive vakagwinya. Vachikurudzirwa naGaston, vanhu veguta vanofunga kuuraya Chikara nekuti vanomutora seane njodzi. Bella anoedza kudzivirira kudzingirira uye akavharirwa mukamuri repasi, zvisinei anokwanisa kutiza nekutenda Chip, mukombe unotaura waimutevera paakasiya nhare uye ivo vanotora rwendo rwekudzokera kunhare kunoyambira Chikara.
Vagari vemuzinda vanoziva kutyisidzira kwaive kuswedera, vanotsanangura hurongwa hwekurwisa uye vanokwanisa kudzinga vese vagari kunze kwaGastón. Aive azvipira kuuraya Chikara chakange chadirwa naBeauty., saka paanoiwana, kurwa kukuru kunotanga. Bella anokwanisa kuzvifananidza paanosvika pamuzinda uye anomhanyira kumusoro kuti amise kurwa.
Panguva iyo Chikara paanoona Bella zvakare, anowanazve kuda kwake kurarama uye munguva yekukanganiswa, Gastón anomurwisa kubva kumashure, achiburitsa ronda rinouraya. Munguva inotevera, Gaston anofa paanodonha kubva kune imwe yema castle tower. Bella anomhanya kunobatsira Chikara uye kana angoreurura rudo rwake, anorasikirwa nehanya uye Bella anochema zvinorwadza. Masekonzi gare gare, mvura yechiedza inotanga iyo zvishoma nezvishoma inoshandura Chikara kuita murume akanaka, Bella anomuziva ipapo ipapo uye vanonama rudo rwavo nekutsvoda. Iyo tsinga yakaputswa uye vese vagari vayo vave vanhu zvakare.
Iye ndiye protagonist wevakakurumbira aladdin bhaisikopo, yakaburitswa muna 1992, nyaya yekutanga iri chikamu chebhuku Chiuru neUmwe usiku hweSyria uye rakashandurwa na Antoine nduru.
Jasmine ndiye mambokadzi weguta reAgrabah, anonzwa kudzipwa nehupenyu hwakazara nezvirambidzo zvinosanganisira chinzvimbo chake chehumambo, saka akafunga kutiza kubva kumuzinda akapfeka semunhuwo zvake. Iri pane imwe yeaya mafambiro kwaanosangana naAladdin, mbavha mudiki shamwari yake yepamoyo imonkey. Vakapedza masikati pamwe chete vachikurukura kusvika vazozivana, pakupera kwemasikati Aladdin anosungwa. Mwanasikana wamambo anoratidza kuzivikanwa kwake uye anoda kuti shamwari yake isunungurwe, zvisinei, mapurisa anokumbira ruregerero achiti iwo mirairo yakananga kubva kuna Jafar uye kuti havagone kuteererwa. Jasmine anobva aenda kuna Jafar kunotsvaga kuti Aladdin asunungurwe, zvisinei Jafar anomunyepera uye oti aurayiwa.
Aladdin anotiza uye anotumirwa kunhume uko kwaanowana mwenje wemashiripiti uye kapeti inobhururuka. Rambi rakanga ratora genie raizopa tenzi waro zvishuwo zvitatu. Saka anosarudza kutevera mudiwa wake Jasmine uye anoda kuve muchinda. Iyo genie inopa chishuwo chake saka iye ane mukana wekuenda kumuzinda kunonyengerera mwanasikana wamambo uye kuwana mukana wekumuroora. Mushure mekufamba kwekudanana Jasmine anomuziva uye Aladdin anotsanangura kuti anoshandisawo kupfeka sevanhu vakajairwa kutiza hupenyu hwake.. Vanowira murudo uye vanosarudza kuroora.
Jafar paanowana mwenje wemashiripiti, anowana chinonyengera chaAladdin ndokutora guta racho: anotora sultan nemambokadzi uye oburitsa hunhu hwaAladdin chaihwo. Pakupedzisira munhu akaipa anova shasha ine simba kwazvo muchadenga nechishuwo chake uye akavharirwa mumwenje wemashiripiti achishandisa musungo. Mwanasikana wamambo pakupedzisira anokwanisa kusanganazve nemudiwa wake Aladdin uye ivo vanowana mvumo yesultan yekuroora.
Ndiye chete muchindakadzi wedzinza reAmerica. Yakaburitswa nechidzidzo muna 1995 uye yakagadzirwa naGlen Keane.
Iye mukadzi wechidiki ane mweya wakasununguka uye simba rakawanda. Iye ndiye mwanasikana wedangwe wemukuru wedzinza uye ave achiroorwa kubva paudiki nemurwi akakosha anonzi Kocoum; zvisinei haambonzwa rudo rwechokwadi kwaari.
Kana vagari vasvika mumusha wake, anosangana naJohn Smith, uyo waanotanga kushamwaridzana naye uyezve manzwiro ake anowedzera. Kana chikomba chamambokadzi chazviona mamiriro acho ezvinhu, iye anodenha John mumutambo munofira Kocoum. Dzinza rinotora John musungwa ndokumutongera rufu.
Pocahontas anoponesa mudiwa wake kubva pakuurayiwa, zvisinei rudo rwake harugone kuenderera sezvo John Smith achifanira kuenda kuLondon uye haakwanise kumuperekedza. Rudo rwavo rwunomiswa uye vanoonekana.
Akatangisa pahwindo guru muna 1998, Iye akashinga mukadzi anobva kuAsia uye kunyangwe asina chero chinzvimbo chehumambo, anokwidziridzwa pachinzvimbo chemuchinda nekuda kwekuita kukuru kunoitwa nenyika yake.
Zano racho rinoitika panguva yehondo umo mhuri yega yega yaifanirwa kutumira murume kuhondo. Zvichakadaro, Mulan anga achidzidziswa kuve mukadzi akanaka mune ramangwana. Akanga asingafare neyakafanorongerwa hupenyu hwake uye akafunga kutiza pamba kuti abatsire vanhu vake muhondo. Iye anonyepedzera kuve murume wemhuri yake uye anotanga kugadzirira kwake kurwa.
Mushure mezvipingaidzo zvakawanda, iye pakupedzisira anowana hunyanzvi hunodiwa uye nekutenda kwaari nemazano ake, vanokwanisa kukunda muhondo uye kunodzivirira kufa kwaMambo. Vanhu vanoziva hunhu hwake uye vanomuyeuchidza nekumupa chinzvimbo chakakosha muchiuto, icho chaanoramba kudzokera kumhuri yake.
Iye ndiye protagonist yemuvhi Tiana y el Sapo, iyo yakaburitswa muna 2009. Iye anozivikanwa nekuve iye wekutanga mambokadzi weruvara mukati menyika yeDisney. Iyo yakavakirwa pabhuku rakanyorwa na ED Baker uye nehama Grimm.
Tiana muchengeti wechidiki uyo anorota rimwe zuva aine yake yekudyira, aive nenzvimbo yakakwana mupfungwa. Nekudaro, akazoziva kuti nzvimbo iyi yanga yave kutotengeswa kune akanaka bhizimusi uye kunyepedzera kwake kwakaparadzwa.
Ndipo paakasangana naPrince Naveen, akashandurwa kuita todo yekutungamira hupenyu hwakazara, husina hanya uye husimbe. Muchinda aizo chengeta fomu irori kusvikira agamuchira kutsvoda, saka anogonesa Tiana kuti amutsvode mukutsinhana nekumupa chikamu chehupfumi hwake kuti azadzise kurota kwekuva muridzi weresitorendi yake. Anobvuma asi chirongwa chinokanganisa uye Tiana anopedzisira ashanduka kuva amphibian futi, saka vaviri ava vanoenda kunoshamisira vachitsvaga voodoo mupristakadzi kukumbira rubatsiro rwake.
Rwendo rwacho rwakanga ruzere nezvidzidzo zvehupenyu uye vanopedzisira vave murudo nehunhu hwavo saka vanobva vafunga zvekuroora, kunyangwe mune yavo toad fomu. Zvinotoshamisa kuti nekuisa chisimbiso muchato wavo nekutsvoda, vese vatambi vanodzokera pakuva munhu uye Tiana anova mambokadzi.
Yakashatiswa, ndiro zita remufirimu maanotamba uye iro rinoburitswa muna 2010. Rinovakirwa pane imwe yenyaya dzakagadzirwa neHama Grimm. Ndiyo yekutanga Disney muchindakadzi bhaisikopo komputa inogadzirwa ne3D animation.
Rapunzel inoratidzirwa nebvudzi rake refu bvudzi. Uye nyaya yacho inotaura nezvekuzvarwa kwake uye kupembera kwakaitwa nemadzimambo mukukudzwa kwake, zvisinei iye akabiwa uye akarerwa naGothel akaipa akamuchengeta ari mushongwe kuitira kuti ashandise masimba emashiripiti aive nebvudzi rake. Kwemakore gumi nemasere, mwanasikana wamambo aigara pasi pekutenda kuti Gothel aive amai vake uye kuti nyika yekunze yaive nenjodzi.
Zvichakadaro munhare kubirwa kwakaitwa, imwe yembavha idzi dzinotiza dzichiwana hutiziro pakahwanda Rapunzel kubva pasi. Anosarudza kukwira shongwe, saka muchindakadzi anorwira kumashure ndokumurova afenda. Gare gare, anounganidza simba rekuenda kunze kwenyika, anowana chokwadi chekare uye anodanana nembavha iya inonzi Eugene uyo waanoroora.
Iye protagonist weiyo firimu Indomitable, Merida achiri kuyaruka-ane vhudzi-rine vhudzi rine nyaya rakagadzirwa naBrenda Chapman uye rakaiswa medieval Scotland. Yakagadzirwa naPstrong naDisney.
Hunhu hwake hwekumanikidza hunomukurudzira kuti ade kuzviitira sarudzo muhupenyu sezvo vabereki vake vakavimbisa ruoko rwavo mukuroora nemwanakomana wemumwe mubatsiri wake, kurapwa kunorambwa naMérida uye kunokonzera nyonganiso muumambo nekuda kwedambudziko retsika. .
Mwanasikana wamambo anotsvaga rubatsiro kubva kune chembere mukadzi waanotaurirana naye kuti achinje mugumo wake achishandisa chipere, chinomushandura kuita bere. Nerubatsiro rwaamai vavo, ivo vanotsvaga kudzoreredza huroyi kuburikidza nhevedzano yezviitiko zvinoita kuti Merida idzidze hunokosha hwakakosha muhupenyu.
Nyaya yaMerida yakasiyana neyevamwe vakasara veDisney, haina kutarisa parudo rwaanarwo kumuchinda. Asi, inotaura zvakanyanya nezvehukama hwehukama pakati pehama nevanin'ina, nenzira imwechete iyo inobata nenyaya dzazvino senge kunzwa kwekusununguka uye kupandukira kunogona kuratidzwa nevechidiki.
Nekuti nyaya dzichiri kushanda, Disney yakafunga kutangazve ehupenyu chiito shanduro nekubudirira kukuru: Cinderella muna 2015 uye Runako uye Chikara muna 2017. Izvo zvakaziviswa kuti shanduro dzeAladdin naMulan dzichaburitswa mumakore anotevera.
Varipi vakasara veDisney World Princesses?
Kunze kweVakadzikadzi veDisney vanoumba kodzero, kune vamwe vazhinji vane nyaya dzinoenderana nekudzidza. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Elsa naAnna (Frozen: humambo hwechando), kuwedzera kuna Princess Sofia, Moana, Megara (Hercules) naEsmeralda (Hunchback yeNotre Dame). Nekudaro, ivo havatariswe mukati mefranchise sezvo kuvhurwa kwavo kwaive kuchangobva kuitwa kana kusabudirira zvakanyanya, zvinodaro nekuti vamwe vane budiriro huru vega.
Zvisinei, zvinonyanya kuitika kuti vachashongedzwa korona mumakore mashoma anotevera sezvo iyo franchise iri kugara iri mukuvandudzwa nguva dzose izvo zvinosanganisira kubva pamapfekero kune mitezo mitsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » Cine » Mazita eVakadzikadzi veDisney